ဂျာမနီမှာတော့ရထားခရီးသွား Amazing Is အဘယ်ကြောင့် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားဂျာမနီ > ဂျာမနီမှာတော့ရထားခရီးသွား Amazing Is အဘယ်ကြောင့်
ဂျာမနီမှာကြီးကျယ်သောတောင်တန်းများရှိသည်, အသက်ရှု - ဆည်းပူးကျေးလက်, နှင့်ရထားခရီးသွားစေတဲ့နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများတစ် ဦး စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံကို. ရှိပါတယ် အများအပြားအလွသောနေရာများ to see including Berlin, မြူးနစ်, ဟမ်းဘတ်, Cologne, နှင့် Frankfurt, နှင့်များစွာသောအခြား. ဤရွေ့ကားဟော့စပေါ့နှင့်သေးငယ်မြို့များအားလုံးတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာစည်းရုံး Hi-Speed ​​ကိုအားဖြင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည် ရထားစနစ်က. ဤသည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိမီးရထားခရီးသွားလာနိုင်အောင်လွယ်ကူစေသည်. ဤတွင်အဘို့အ holidaymakers များအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည် ဂျာမနီမှာမီးရထားခရီးသွားလာ သငျသညျအမြားဆုံးရှိသေချာစေရန် ပျော်စရာခရီး ဖြစ်နိုင်သော.
အဆိုပါဂျာမန်ရထားကွန်ရက်က Deutsche Bahn ဖြင့်လည်ပတ်. ဒါဟာသင်နေ့ညဉ့်မပြတ်နှစ်ဦးစလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရထားအမျိုးအစားနံပါတ်ပေးသည်. ဂျာမနီမှာအဓိကရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုဒေသတွင်းရထား၏ဖွင့်ထား (ထိုကဲ့သို့သောဒေသတွင်းအမြန်အဖြစ်) နှင့် အချင်းချင်းရထား. အချင်းချင်းရထား key ကိုမြို့ကြီးများအကြားပြည်တွင်း၌နှင့်နိုင်ငံတကာတွင် operate.
ထိုကဲ့သို့သောပြည်တွင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအဖြစ်ဂျာမနီမှာခရီးသွားလေ့ကငျြ့ဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်, အဆိုပါ ICE (အချင်းချင်း Express ကို). ဤသည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိလူကြိုက်အများဆုံးရထားဖြစ်ပါသည်, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာ key ကိုမြို့ကြီးများကိုဆက်သွယ်ထားသော. ဤ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား 200mph မှတက်၏အမြန်နှုန်းမှာခရီးသွား (320 km / h).
The best use of Train travel in Germany is during the day, အစာရှောင်ခြင်းအချင်းချင်း Express ကိုအပါအဝင်, do not require seat reservations. သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ခရီးစီစဉ်နေကြသည်လျှင်မထိခိုက်လည်းမရှိ ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံ booking. ရှုခင်းအဘို့အပြတင်းပေါက်ထိုင်ခုံ Secure သို့မဟုတ်ပဲသငျသညျအမြင့်ဆုံးနှစျသိမျ့တွေ့ကြုံခံစားစေရန်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကိုရွေးပါ.
အချို့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား နှင့် နေ့ချင်းညချင်းလမ်းကြောင်းများ ထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်အဖြစ်, ဘရပ်ဆဲလ်, ဗင်းနစ်, သို့မဟုတ်ကိုပင်ဟေဂင်သင်ဘော်ဒါမတိုင်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိသည်လိုအပ်ပါဘူး. သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်မှကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား site ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ဒါကြောင့်သင်ကကြိုတင်မှာကြားထားစေရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေမဖော်ပြလိမ့်မယ်.
ဘူတာရုံ Locker တွေကိုသုံးပါ – ဂျာမနီမှာမီးရထားခရီးသွားလာ
ဂျာမန်ရထားဘူတာအများစုမှာဘဏ်အတော်များများရှိတယ် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်သော့ခတ်. ဤသည်အသေးစားနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလိုက်လျောညီထွေဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားသောအထုပ်အပိုး. သင်သည်သင်၏ချိတ်ဆက်ရထားရွက်မတိုင်မီတစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒါရှိပါက, သင့်ရဲ့ထား အထုပ်အပိုး တစ်ဦး Locker သို့, သောက်ဘို့အသွား, သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတဝိုက်တိုတောင်းကြည့်ကြ.
Frankfurt Hanover မှရထား
Cologne Hanover မှရထား
Locker တွေ၏စျေးနှုန်းဟာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်သည်. သငျသညျအိတ်များအတွက်လျော့နည်းသိုလှောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာဆိုလိုတယ်, သငျသညျလျော့နည်းခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ပေးချေမည်. ဂျာမနီမှာဘူတာရုံ Locker တွေ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေး€ 1 အကြားဖြစ်ပါသည် – €524 နာရီကိုအသုံးပြုခြင်း.
ဂျာမဏီနေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ် မိသားစုနှင့်အတူသွားလာ. ဂျာမန်မီးရထားရထားတွင်, children under the age of six travel for free with no ticket needed. Children over6ဒါပေမဲ့ အောက်မှာအသက် 15 အခမဲ့ကိုလည်းခရီးသွားလာ သူတို့တစ်တွေခ-ပေးဆောင်အရွယ်ရောက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ကိုတစ်ကြိမ်.
ဂျာမဏီန်းကျင်ရထားကိုယူပြီးစဉ်းစား? တစ်ဦးကရထားအွန်လိုင်း Save ရန် Go အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်! အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow Facebook က, တွစ်တာ, နှင့် တစ်ဦးကရထား Instagram ကို 's Page ကို Save ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ပိုပြီးကြည့်ဖို့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ဂျာမန်ရထားလမ်း ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelgermany